COVID wuxuu dilay Ekundo! Aloha Libaaxa Afrika ee Waikiki
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Dalxiiska » COVID wuxuu dilay Ekundo! Aloha Libaaxa Afrika ee Waikiki
Wararka Jabinta Hawaii • News • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
COVID wuxuu dilay ku dhawaad ​​5 milyan oo qof tan iyo markii uu noqday masiibo horraantii 2020.
Inta badan hilmaamku waa xayawaanno badan oo u dhinta COVID. Mid wuxuu ahaa Ekundo, libaaxa Afrikaanka ah ee ku nool Zoo Honolulu Zoo ee Waikiki, sidoo kale wuxuu aad u jeclaa dadka soo booqda sannado badan inay daawadaan.
Duqa magaalada Honolulu Rick Blangiardi ayaa ku dhawaaqay geerida libaax lab ah oo 13 jir ah.
Libaaxa ayaa u dhintay xaalado caafimaad oo liita Isniintii Xayawaanka Honolulu gudaha Waikiki
Labadaba Ekundu iyo libaax dheddig ah oo 12 jir ah, Moxy, ayaa markii ugu horraysay muujiyey calaamado xanuun xagga neef-mareenka sare ah iyagoo xoogaa qufacaya Isniintii, Oktoobar 4, 2021.
Muunado ayaa isla markiiba laga soo ururiyey labada libaax si loo tijaabiyo SARS-CoV-2, fayraska sababa COVID-19 ee aadanaha.
Ekundu, oo laga daweynayey qallalka in ka badan shan sano, ayaa bilaabay inuu xanuunsado ilaa uu wax ka cuno. Mar haddii uusan heli karin dawadiisii ​​taageerada cuntada, kooxaha daryeelka xoolaha iyo xayawaanka waxay go'aansadeen inay suuxiyaan si ay u siiyaan daaweyn sida antibiyootiko, daaweynta dareeraha, iyo daawooyin kale si ay uga caawiyaan inuu dareemo fiicnaan. Isla mar ahaantaana, shaybaarro gaar ah oo dheeraad ah ayaa la soo ururin karaa si loo sii baaro sababaha kale ee suurtogalka ah ee sababa cudurka neef -mareenkiisa. Calaamadaha neefsashada sare ee Ekundu ayaa la xaliyay iyada oo laga jawaabayo daaweynta, laakiin wuxuu bilaabay inuu muujiyo astaamaha cudurka neef -mareenka oo ay ku adkaato neefsashadu dhawrka maalmood ee soo socda. In kasta oo la socday kormeer habeen iyo maalin ah iyo daaweyn joogto ah, Ekundu wuxuu dhintay hal toddobaad kadib markii astaamihiisii ​​markii hore la soo bandhigay.
Sababtoo ah tijaabinta lagu sameeyay shaybaarrada dhul-weynaha, natiijooyinka muujinaya in labada libaax ay ku fiicnaadeen SARS-CoV-2 ayaa la helay kaliya ka dib markii Ekundu dhaaftay. Iyada oo la filaayo isku xirka COVID, shaqaalaha daryeelka caafimaadka xoolaha ayaa dajiyay daaweyn iyo borotokoollada noolaha oo la jaan qaada waxa xayawaannada kale ee la aqoonsan yahay ee AZA ay hirgeliyeen si looga jawaabo faafitaanka SARS-CoV-2 ee dalka oo dhan. Dhakhtarka xoolaha ee Jill Yoshicedo ayaa la wadaagay in “inta badan cudurrada SARS-CoV-2 ee bisadaha waaweyn ee aan guriga ahayn ay ahaayeen cudurro fudud oo si wanaagsan uga jawaabaya daryeelka taageerada, Ekundu wuxuu ahaa, nasiib darro, mid ka mid ah kiisaska cusub ee COVID u muuqdo inuu ku xiran yahay daran oof -wareenka iyo lumitaanka naxdinta leh ee noolahaas. ”
The zoo wuxuu hadda sugayaa baaritaan xaqiijin ah oo loogu talagalay SARS-CoV-2 iyo sidoo kale natiijooyinka cudurada oo gacan ka geysan doona go'aaminta heerka doorka caabuqa fayrasku ku yeeshay dhimashadiisa. In kasta oo astaamaha Moxy ay u muuqdeen inay si dhakhso ah u yaraanayaan, shaqaaluhu waxay si taxaddar leh ula socdaan waxayna sii wadaan inay siiyaan daryeel taageero iyo daaweyn. Xaaladda Moxy waxay u muuqataa mid hadda deggan oo waddo u ah soo kabasho buuxda.
Wali lama garanayo meesha uu ka yimid caabuqa libaaxyada. Dhammaan shaqaalaha xiriirka dhow la leh libaaxyada ayaa hore loo tallaalay oo u hoggaansamay siyaasadda tallaalka shaqaalaha Magaalada. Waxaa sidoo kale laga baaray COVID-19 waxaana la ogaaday inay xun yihiin. Shaqaalaha Zoo -ku waxay sii wadaan inay ku dhaqmaan borotokoollo adag oo biohazard ah si looga hortago faafitaanka fayraska meelaha kale ee xayawaanka ah.
Agaasimaha Zoo -ga Santos ayaa xusay, “Waxaan ku ammaanayaa shaqaalaheena caafimaadka xoolaha iyo ilaaliyaasha dadaalka dheeriga ah ee ay u hayaan Ekundu. Maaddaama uu yahay libaaxa labka ah ee jooga Honolulu Zoo, Ekundu wuxuu ahaa mid la jecel yahay oo astaan ​​u ah. Zoo ohana wuxuu aad uga xun yahay geeridiisa, waxayna ka wada shaqeynayaan sidii diirada loogu saari lahaa caafimaadka iyo daryeelka Moxy, iyo daryeelka inta kale ee xoolaheena ah ee ku jirta beerta xayawaanka. ” Santos wuxuu sii raaciyay, “Maaddaama xayawaanku ka qaadi karaan COVID-19 aadanaha, shaqaalaheenna waxaa la xusuusinayaa inay si joogto ah oo joogto ah u shaqeeyaan si ammaan ah oo ay raacaan qawaaniinta si loo ilaaliyo xayawaankeenna. Waxaan sidoo kale jeclaan lahayn inaan ka faa'iideysanno fursadan si aan u xusuusinno dhammaan martida soo booqanaysa beerta xayawaanka inay xirtaan maaskaro meelaha la garto ee halista u ah zoonotic-ka oo ay ku jiraan dugaagga, bisadaha, eyda, iyo digaagga.
Ekundu wuxuu dhashay 2 -dii November, 2007, wuxuuna yimid Honolulu Zoo sanadkii 2010. Iyadoo ay weheliyaan saaxiibkiisa Moxy, waxay koriyeen saddex libaax oo libaaxyo ah kuwaas oo loo wareejiyay xayawaanka kale oo qayb ka ah Ururka Zoos iyo Aquarium's (AZA) Noocyada Qorshaha Badbaadinta. Libaaxyada Afrika waxay sida caadiga ah ku nool yihiin maxaabiis ahaan 15-25 sano.